छोराको हत्यारालाई मुख्यमन्त्रीले स्वकीय सचिव बनाएपछि… « News24 : Premium News Channel
छोराको हत्यारालाई मुख्यमन्त्रीले स्वकीय सचिव बनाएपछि…
बुटवल । १३ वर्ष अघि बुटवलमा प्रचण्ड थैवका हत्या अभियोगी सुजित बिक जेल सजय भोगेर हालै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका स्वकीय सचिव नियुक्त छन् । उनी स्वकीय सचिवमा नियुक्त भएदेखि नै विवादमा तानिएका छन् ।
थैवको हत्या अभियोगमा १० वर्ष जेल सजाय पूरा गरेका बिक स्वकीय सचिवमा नियुक्त भएपछि लुम्बिनी सरकारप्रति कानुनी भन्दा पनि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ।
मृतक प्रचण्ड थैवको परिवार
२०६५ साल चैत्र १३ गते बुटवलको हिलपार्क पुल नजिकै प्रचण्ड थैबलाई गोली प्रहार गरेको आरोपमा बिक पक्राउ परेका थिए। हत्यामा दोषी ठहर भएपछि बिक १० वर्ष जेल चलान भएका थिउ । तर, जेल जीवन बिताएर निस्केपछि उनी हाल मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवको रुपमा रहेका छन् ।
थैबकी आमा सुकन्या थैवले जेल जीवन बिताएको हत्यारालाई मुख्यमन्त्रीले स्वकीय सचिव बनाएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरिन् । उनले छोरा मारिएको १३ वर्षसम्म पछि फेरी अपराधीलाई स्वकीय सचिव बनाएर आलो घाउँमा नुन चुक छर्किदिएको बताइन् ।
उनले रुँदै भनिन्, ‘छोरा मारिएको १३ वर्षसम्म जसोतसो कटाएका थियौँ, फेरि पनि आज १३ वर्ष जेलमा बसेको उपराधीलाई यहीँ बुटवलमा आएर मुख्यमन्त्रीले स्वकीय सचिवमा नियुक्त गर्नुभो। २०६५ सालमा परिवारलाई लागेको दुःख फेरी दोहोरिएर आउँदा ज्याँदै दुःख लागेको छ।’
उनले हत्यारालाई स्वकीय सचिव बनाउँदा पनि कसैले पनि विरोध नगरेको भन्दै प्रश्न गरिन् । ‘मुख्यमन्त्रीले हत्यारालाई स्वकीय सचिव पदमा राख्दा कसले विरोध गरेनन्, के कारण होला लाग्यो ? चोट त हाम्रो परिवारलाई लाग्यो अरुलाई के पो लाग्थ्यो र ?,’ उनले भनिन् ।
मृतक प्रचण्ड थैव
उनले मुख्यमन्त्रीले हत्यारालाई स्वकीय सचिव बनाउनु लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिष्ठा पनि दाग लागेको पनि बताइन् । प्रतिपक्षीद दल एमालेले पनि कुनै विरोध नगर्नु पीडादायी भएको विचार व्यक्त गरिन् ।
बिकले सजाय भोगेपछि उनको जीवन स्वतन्त्र रुपमा जिउन पाउने अधिकार रहेको र आफूहरुको नजरबाट राजीनमा दिएर अन्यत्र जान उनले सुझाइन् ।
थैबकी दिदी सुष्मा श्रेष्ठले पनि हत्यारालाई स्वकीय सचिव बनाउनु दुःखद रहेको बताइन्। उनले हत्याकाण्ड सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि बुटवलमा फेरी आएर मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिव बन्नु आफूलाई चुनौती दिएको महशुस भएको बताइन् । ‘बुटवलमा नआएर अन्तै गएर बसे आफूहरुको दुःख भुल्न सजिलो हुने थियो।’ उनले भनिन् ।
थैवकी श्रीमती लक्ष्मी श्रेष्ठले १३ वर्ष जेल बसेकोलाई मुख्यमन्त्रीले स्वकीय सचिव बनाउनु लाजमर्दो भएको बताउँदै सुजित विकले बुटवलमा मुख देखाएर हिड्दा लाज लागेन भन्दै प्रतिपश्न गरिन् ।
मृतक प्रचण्ड थैवका हत्यारा सुजित बि.क.
‘१३ वर्ष जेल बसेको आएको हत्यारा फेरी बुटवलमा आएर मुख देखाएर हिड्दा लाजसरम लाग्दैन, ’ त्यसपछि उनले रुदैँ भनिन्, ‘उसले १३ वर्ष अगाडिको कुरा सोचेन ।’
मुख्यमन्त्री स्वकीय सचिव बनेर बुटवलमा आउनु आफ्नो परिवारमाथि झन खतरा बढेको पनि उनले बताइन्। साथै, फेरि पनि विगतकै जस्तो घटना दोहोरिन सक्ने र स्वकीय सचिव नियुक्ती गर्नु दुर्भाग्य भएको पनि उनले आरोप लगाइन् ।
१३ वर्ष जेल काटेर आएको मान्छे अहिले मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिव बन्दा दुःख लागेको स्वर्गीय प्रचण्ड थैवका छोरा रागघ थैव बताउँछन् । तत्काल राजीनामा दिएर अन्त कतै गएर बस्नुपर्ने उनको भनाई छ । राघबले जेलबाट छुटेर आएर स्वकीय सचिव पाउनु कारण के हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवमा नियुक्त भएपछि विवादित बनेका बिककी श्रीमती दिपा बिक लुम्बिनी प्रदेश सभामा सदस्य छिन् ।